Wed, Sep 30, 2020 at 5:24am
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बढी सवारी चाप हुने कोटेश्वरदेखि जडिबुटिसम्म सडक विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल चार लेन रहेकामा तीन लेन थप्न संरचना हटाउने काम अघि बढेको छ । यो सडकमा तीन लेन थपिएपछि यहाँको सवारी चाप केही कम हुनेछ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले गत महिनादेखि सडकका दुबैतर्फको निर्माणस्थल खाली गरिरहेको डिभिजन प्रमुख कुबेर नेपालीले बताए ।..
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बझाङमा १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बझाङ बलात्कार घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउन आएका सुदूरपश्चिमका सङ्घीय सांसदसँगको आजको भेटमा उनले घटनालाई राज्यले चुनौतीका रुपमा लिनुपर्ने बताए । सभामुख सापकोटाले जनता अन्याय, दमन र समस्यामा परेका बेला उनीहरुलाई साथ दिनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएको बताउँदै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि..
लहान । सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आज बिहान सिरहाको सुखीपुरबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बेश क्याम्प सुखीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुखीपुर नगरपालिका–४ कविलासीबाट १९ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद गरेको हो । गस्तीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई देखेपछि मोटरसाइकल र प्लाष्टिकको बोरा छाडेर भागेपछि शङ्का लागेर बोरा जाँच गर्दा गाँजा बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बेश क्याम्प सुखीपुरका प्रहरी..
काठमाडौं, १३ असाेज । मंगलबारकाे छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपवादबाहेक सबै मन्त्री हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मंगलबारकाे छलफलमा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने उक्त प्रस्ताव स्वीकार्न तयार नभएकाे बताएकाे स्रोतले जनाएको छ । उनले अहिले खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । दुई अध्यक्षबीच सहमति कायम..
काठमाडौं, १३ असाेज । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा आज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भइरहेको छ । केही बेरअघि बालुवाटारमा सुरु भएको छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पार्टी एकताका थाती रहेका काम टुंग्याउने सन्दर्भमै कुराकानी भइरहेको स्रोतले बताएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै विषयमा ओली–प्रचण्ड तीन दिनदेखि लगातार छलफलमा छन् । तर, छलफल टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच..
काठमाडौं, १३ असाेज । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको करिब सात महिना पुग्न थालेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै राज्यकोषको करिब २० अर्ब सिध्याइएको छ । तर पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । झन् झन् फैलिँदो छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको एक मात्र काम भनेको लकडाउन र निषेधाज्ञा हो । अरु उच्चारण गर्नलायक देखिएको छैन । किनभने..
काठमाडौं, १३ असाेज । महिला सांसदहरुले १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन माग गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सोमबार बलात्कारका घटना बढेको विषयमा छलफल गर्दै महिला सांसदहरूले बलातकारीलाई कडा सजाय गर्नुपर्नेमा एकै स्वरमा जोड दिएका हुन् । १५ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने र नपुंसक बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा उानीहरुले जोड दिएका छन् । छलफलमा प्रमुख..
खोटाङ (दिप्रुङ), १३ असोज । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणका माध्यमबाट नियमित पठनपाठन शुरु गराएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण अवरुद्ध पठनपाठनलाई नियमित गराउन गाउँपालिकाले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको दफा ५ को (क) ४ बमोजिम आइतबारदेखि पठनपाठन शुरु गराएको हो । गाउँपालिकाभित्रका ४८ विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता..
धरान, १३ असोज । सुनसरी मोरङका एक कोराना सक्रमितको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको छ । मोरङको सुनबर्षी नगरपालिकाका–७ की ६८ बर्षीय पुरुषको उपचारका क्रमम आज विहान मृत्यु भएको हो । असोज १० गतेदेखि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका सक्रमित पुरुषको आज बिहान ३ बजे मृत्यु भएको हो । विराटनगरको नोवेल अस्पतालवाट रेफर भएर आएका उनी उच्च रक्तचाप, मधुमेहसँगै..
बाँके, १३ असोज । बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका अनुसार नेपालगञ्जका ४१ वर्षीय पुरुष र कोहलपुर नगरपालिका वडा नंं. १० का ५३ वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो । नेपालगन्जका मृतक नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी भएको बताइएको छ । उपचारका क्रममा गएराति एक जना र बिहान ४ बजेको..
बैतडी, १३ असोज । बैतडीको पाटन नगरपालिका कार्यालयका कागजपत्रहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको टोलीले सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनियमितताको उजुरीपछि कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरीशचन्द्र जोशीले बताए । कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गरेको भनेर फोन र लिखित उजुरी आएपछि कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा..
हुम्ला, १३ असोज । हुम्लामा थप दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यही असोज ४ मा एक २२ वर्षीया किशोरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनीको सम्पर्कमा आएको पीसीआर परीक्षण गर्दा दुई पुरुषमा आज पोजेटिभ देखिएको हो । बाँकेको नेपालगञ्जबाट समिट एयरको उडान मार्फत असोज ३ गते शनिबार सिमकोट आएकी सङ्क्रमित किशोरीसँग आएका ती दुई जना पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जन..
काठमाडौं, १३ असोज । राजधानीका स्थानीय तहमा मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने वनस्पति गुर्जो रोपणका लागि वितरण अभियान तीव्र भएको छ । गुर्जोका बिरुवा निःशुल्क बाँड्दै आउनुभएका आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानका प्रमुख कमलबहादुर राजलवटले सोमबार राजधानीका तीन स्थानीय तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार विभागमा बिरुवा हस्तान्तरण गरेका छन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई २००, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई २०० र सूर्यविनायक..
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले दशैंँका लागि तीन जिल्लाबाट खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ । दाङ र मकवानपुरबाट एक हजार खसी तथा बोका र मुस्ताङबाट एक हजार च्याङ्ग्रा ल्याउने निर्णय भएको कम्पनीले जनाएको छ । शुरुआती चरणमा उक्त स्थानबाट तीन हजार खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी भए तापनि शुरुआती चरणमा..
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन गरी चौधौं महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत दुई दर्जन बढी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरिएको पत्र आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका..
काठमाडौं, १२ असाेज । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा सोमबार भएको भेटवार्तामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति जुट्न सकेन । मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे समझदारी बनाउन दुई अध्यक्षबीच बिहीबारयता लगातार छलफल भइरहेको छ । सोमबार साढे १ घण्टा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा पनि ठोस सहमति बन्न नसकेको हो । छलफल जारी राख्ने सहमति भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु..
बर्दिया, १२ असाेज । बर्दियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढेसँगै बर्दियामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले १३ असोजदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । जोर बिजोर प्रणालीसँगै जिल्लाका सबै पसलहरू शनिबार पूर्णरूपमा बन्द गर्ने र अन्य दिनमा बिहानको १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन..
काठमाडाैं, १२ असाेज । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आज पनि भेटवार्ता हुँदैछ। छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड भर्खरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। उनीहरूबीच केहीबेरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा छलफल हुनेछ। ६ असोजमा बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन दुई अध्यक्षको सहमतिमा..
काठमाडौं, १२ असाेज । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकाे निर्णयविरुद्ध रामचन्द्र पौडेलको समूहले विरोधपत्र दर्ता गर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका पछिल्ला निर्णय सच्याउन माग गर्दै सोमबार पौडेलको समूहले विरोधपत्र दर्ता गर्ने भएकाे हाे । विरोधपत्रमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई जोड्ने प्रयास असफल भएपछि आइतबार अन्तिम चरणमा आएर विरोध पत्र दर्ताको कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।आज पौडेल समूहका २७ नेताद्वार हस्ताक्षरित विरोधपत्र दिउँसो १ बजेपछि..
काठमाडाैं, १२ असाेज । नेपाल धिताेपत्र बजारमा काराेबार हुने सेयरहरु धिताे राखी नबिल बैंकबाट सस्ताे ब्याजदरमा सजिलै सेयर धिताे कर्जा उपलब्ध गराउन शुरु गरेकाे छ । ५० लाख वा साे भन्दा बढीकाे नबिल सेयर कर्जा वार्षिक ७.७५ प्रतिशतकाे आकर्षक ब्याजदरमा उपलब्ध भएकाे बैंकले जनाएकाे छ । दशैंको सुअवसरमा राष्ट्र बैंकको मार्गनिर्देशनभित्र रही नबिल बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट शेयर धितो कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।..
काठमाडौं, १२ असोज । टोखा नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८२५ पुगेको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा आइतबार थप २९ सङ्क्रमित थपिएसँगै नगरपालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ८२५ पुगेको हो । वडा नं १ मा सबैभन्दा थोरै २१ र वडा नं ३ मा सबैभन्दा धेरै ९५ कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । वडा नं २ मा ५१, वडा नं ४ मा..
काठमाडौं । वर्षेनी १० देखि १५ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिने पूर्वी प्रवेशद्वार काँकडभिट्टा कोभिड–१९ को महामारीका कारण विगत छ महिनादेखि सुनसान छ । नाकाको भौतिक अवस्था भने कोभिड शुरु भएयता कायापलट भइसकेको छ । एसियन हाइवेअन्तर्गत सीमानादेखि एक किलोमिटर नेपाली भूमिभित्र रमितालाग्दो छ लेनको झिलीमिली सडक बनिसकेको छ । मेची नदीमाथि छ लेनकै नवनिर्मित पुल उद्घाटनको पर्खाइमा छ । हरेक वर्ष..
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अनुसार नेप्से ४.२९ बिन्दुले उकालो लागेर एक हजार ५६५.५५ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०।९० ले वृद्धि भई ३१०.४७ मा पुगेको छ । कूल १९१ कम्पनीको एक करोड ९७ लाख ७२ हजार ३११ कित्ता शेयर रु तीन अर्ब १३..
काठमाडौं । सबै प्रयोगशालाले अब पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट सम्बधित व्यक्तिलाई दिन पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट नेगेटिभ वा पोजेटिभ जे भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन प्रयोगशालालाई निर्देशन दिइएको बताए । यसअघि प्रयोगशालाले रिर्पोट नेगेटिभ आएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई र पोजेटिभ आएमा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई दिँदै आएका थिए ।..
काठमाडौं, ११ असाेज । आइतबारकाे मन्त्रिपरिषद‍‍्को बैठक सकिएको छ । आइतबार मध्यान्ह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा डा.दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाल र इजरायलबीच हुने विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा.अन्जन शाक्यलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आज बिहान..
काठमाडाैं, ११ असाेज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको भेटवार्ता सकिएको छ। बालुवाटारमा भएको उक्त छलफल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा केन्द्रित रहेको भए पनि कुनै ठोस सहमति नभएको बताइएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटा जुगलले आजको छलफलमा कुनै सहमति भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, पार्टी एकता लगायतका विषयमा छलफल भए पनि कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन..
काठमाडाैं, ११ असाेज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आजै १२ मन्त्रिपरिषदको C बैठक बस्नुअघि प्रचण्डसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन कै विषयमा प्रचण्डसँग छलफल गरिरहेका..
काठमाडौं । एसिड आक्रमण विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा महिला, कानून र विकास मञ्चले स्वागत गरेको छ । एसिड आक्रमण विरुद्ध कानून निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश जारी गरेको हो । नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नुपर्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक..
झापा, ११ असोज । झापाको कनकाई नगरपालिका–९ घैलाडुब्बाका ४५ वर्षीय पुरुषको कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएको छ । नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलका अनुसार शनिबार राति कोभिड अस्पताल विराटनगरमा उनको मृत्यु भएको हो । उनी उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीसमेत थिए । आज कनकाई आर्यघाटमा परिवारको उपस्थितिमा शवको दाहसंस्कार गरिने उनले बताए । हालसम्ममा कनकाई नगरपालिकाका दुई जना कोभिड सङ्क्रमितको प्रदेश नं १..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । विशेष श्रोतका अनुसार आइतबार मध्यान्ह १२ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको हो । शनिबार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाउने मनसायमा प्रधानमन्त्री पुगेका श्रोतले जनाएको छ । यसअघि नियमितरूपमा मन्त्रिपरिषद बैठक सोमबार र बाँकी रहेका एजेन्डाका लागि पुनः बिहीबार बस्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा चुलिएको छ । सोही..
Results 10932: You are at page 1 of 365
1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 Next Last